अब एक दिनमा ४० मिनेटमात्र टिकटक चलाउन पाउने – Dainik Samchar
November 12, 2021 135
विश्वमा अत्यन्तै लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटक चीनमा चाहिं डुइनको नामबाट उपलब्ध छ । डुइन चीनमा सर्वाधिक लोकप्रिय एपको रुपमा रहेको छ र यसका प्रयोगकर्ताहरुमा कम उमेरका किशोर किशोरीहरु अत्यधिक छन् ।
आफ्नो वास्तविक पहिचानबाट डुइनमा खाता खोलेका १४ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका लागि यो नियम लागू हुनेछ । बालबालिकाहरुले बिहानको ६ बजेदेखि रातको १० बजेसम्मको अवधिमा केवल ४० मिनेट मात्रै डुइन चलाउन पाउनेछन् ।
चिनिया टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सले एक ब्लगपोष्टमार्फत् डुइनमा युथ मोड को घोषणा गरेको छ । बालबालिकाहरुलाई डिजिटल अम्मलबाट जोगाउनका लागि यस्तो सीमा राख्ने आफू नै पहिलो प्लाटर्फम रहेको दाबी कम्पनीको छ ।
त्यस्तै गत फेब्रुअरीदेखि चीनले विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा फोन प्रयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।बीबीसी
Prevदुबईमा २०० जना डेलिभरी बोयमा रोजगारको अबसर, अन्य सेवा सुबिधाहरु के कति हुने ?
Nextवैदेशिक रोजगारमा गएकाले हेर्नै पर्ने, श्रम स्वीकृत बारे आयो यस्तो खबर !
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहद्धारा अत्यन्त जरुरी सूचना जारी !
किशोरीलाई ब’लात्कार गरेको अभियोगमा सात वर्ष कैद